रामेछापको अनौठो घटना : सम्झना अब कसकी बुहारी ?
रामेछाप– कात्तिक ९ गते शुक्रवार । रातिको १० बजे । रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका ६ खिम्ति बजार नजिक रहेको प्रेमबहादु खड्को घरको ढोकासुस्तरी खुल्छ । प्रेमका कान्छा छोरा सुमनको ध्यान ढोकातर्फ जान्छ । ढोकाबाट उनकी भाउजु सम्झना बाहिरिन्छिन् । भाउजु शौचालय गएको हुनुपर्छ, सुमन सोच्छन् ।
करिब १ घन्टा बित्नै लाग्दा पनि सम्झना घर नफर्किएपछि सुमनले बुवालाई बोलाए । ‘लामो समय भयो भाउजु बाहिर गएको, आउनु भए न त !’ सुमनले बुवालाई सुनाउँछन् ।
नेपाली सेनामा कार्यरत छोरा शुभराज खड्कासँग ४ वर्षअघि विवाह बन्धनमा बाँधिएकी प्रेमकी बुहारी सम्झना राति १० बजे घरबाहिर निस्किएर नआएपछि परिवारका सदस्यहरु चिन्तित बने । घर बाहिर बत्ति बाले । वल्लो पल्लो घरका छरछिमेकलाई बोलाए ।
प्रेमबहादुरले आफ्नी बुहारी हराएको भन्दै टोलछिमेकलाई बोलाएर खोज्न हिँडे ।
घरबाट करिब ५ मिनेटको दुरीमा (बाटो छेउको झाडी जस्तो ठाउँ)मा महिला र पुरुष देखिए । मानिसहरुको भीड देख्नासाथ पुरुष भागे तर अध्यारो भएका कारण उनलाई चिन्न सकेनन् । बुहारी खोज्न हिँडेका प्रेमबहादुरलाई त्यतिबेला छाँगाबाट खसेजस्तै भयो, जब त्यो अँध्यारोमा भेटीएकी महिला आफ्नै बुहारी भएको थाहा पाए ।
केटासँग भेटेपछि प्रेमबहादुर र छरछिमेकीले सम्झनालाई केरकार गरे । सबैजनाको केरकारमा परेकी २२ वर्षीय सम्झनाले आफूसँगै रहेको केटा छिमेकी २३ वर्षीय विपिन दाहाल रहेको बताइन् ।
त्यसपछि आक्रोशमा अाएका खड्का परिवार र छरछिमेकी विपिनको खोजीमा उनको घरमा गए । विपिनले आफू र सम्झनाबीच प्रेम रहेको र शारीरिक सम्बन्ध समेत रहेको बताए । जसलाई सम्झनाले पनि स्वीकार गरिन् ।
सम्झनाको ‘चरित्र’ थाहा पाएपछि प्रेमबहादुरको परिवारले ठाउँको ठाउँ उनीसँगको नाता ताडेको घोषणा गर्यो । प्रेमबहादुरले सम्झनालाई विपिनको जिम्मा लगाए । विपिनका बुबा विनोद दाहाल र ठूलो बुवा भरत दाहालसमेतको उपस्थितीमा विपिनले सम्झनालाई स्वीकार गर्न राजी भए । तर यो कुराले विपिनको आमालाई पिरोल्यो । अरुको घरकी बुहारी त्यसमा पनि क्षेत्रीलाई बुहारीको रुपमा भित्र्याउनु पर्ने स्थिति आएपछि उनी त्यहिँ मुर्छित भइन् । विपिनकी आमा नै अचेत जस्तै बनेपछि काका भरत दाहालले केटालाई भोलिपल्ट उपस्थित गराउने सर्तमा कुरा मिल्यो । सम्झनालाई लिएर खड्का परिवार घर लागे ।
सम्झना र विपिनको प्रेम
एक सामाजिक संस्थामा प्राविधिकको काम गर्ने विपिन दाहाल र सम्झना खड्काबीच केही समय अघिदेखि प्रेम सम्बन्ध थियो । विवाहित सम्झनालाई सिउँदो भरेर भित्र्याउन पनि विपिन तयार थिए । उनीहरुबीच टेलिफोनमा कुराकानी र काठमाडौंमा रहेको बेलामा भेटघाट समेत हुने गरेको थियो । गाउँमा गएको बेलामा भने रातको समयमा भेटघाट हुने र शारीरिक सम्बन्ध समेत राख्ने गरेका थिए । बनेपा पोलीटेक्नीकमा आइटी पढ्ने सम्झना दशैंको समयमा घरमा आएकी थिइन् ।
उल्टै केटीमाथि आरोप !
घटना भएको विहानै बुहारीलाई जिम्मा लगाउन खड्का परिवार विपिन दाहालको परिवारलाई कुरेर बसेको थियो । तर मध्याह्नसम्म विपिन नआएपछि समस्या उत्पन्न भयो ।
खड्का परिवार विपिन दाहालको घरमा पुग्यो । तर विपिनका बुबाले हिजोको घटनाबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । ‘हिजो के भएको थियो र ?’ भन्दै प्रश्न गर्न थाले । उनले आफूहरुलाई फसाउन खोजेको आरोप पनि सम्झना खड्कामाथि लगाए । विपिन त्यसदिनदेखि घर आएका छैनन् । सोही दिनदेखि विपिनका आमा बुवा पनि घरमा ताल्चा लगाएर हिँडेका छन् ।
विपिन नआएपछि खड्का परिवार नजिकै रहेको प्रहरी चौकी पुग्यो । तर, प्रहरीले पनि यसमा केही निर्णय गर्न सकेन । प्रहरीले गाउँपलिकामा रहेको न्यायिक समितिमा जान र निर्णय गरेर ल्याउन भन्यो । त्यसपछि खड्का परिवार स्थानीयको साथमा गाउँपालिकाको कार्यालय पुग्यो ।
सम्झनाले आफू र विपिनबीच शारीरिक सम्बन्ध रहेको र उसले विवाह गर्ने बचन दिएकाले नाता कायम गरिपाउँ भन्दै लिखु गाउँपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिइन् ।
तर, गाउँपालिकामा पनि अर्को समस्या खडा भयो । गाउँपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक (गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष) दिपशिखा सम्झनाका प्रेमी विपिनकी ठूली आमा परिन् । उपाध्यक्ष दिपशिखाले घटनाबारे निर्णय गर्न न्यायिक समितिको बैठक बसाउन मानिनन् । आफू व्यस्त रहेको भन्दै उनी तर्कन थालेपछि समस्या समाधान गर्न स्थानीयले गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई आग्रह गरे । गाउँपालिकाका अध्यक्ष पनि काठमाडौंमा रहेपछि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षले उल्टै सम्झनामाथि नै आरोप लगाएको स्थानीयको भनाइ छ । गाउँपालिका उपाध्यक्षले केटी पक्षबाट विपिनलाई फसाउन खाजेको भनेर गाउँभरि नै हल्ला गर्दै हिँड्ने गरेको खड्का परिवारको आरोप छ । ‘हामी न्याय माग्नका लागि उपाध्यक्षकहाँ गयौं,’ प्रेमबहादुरकी छोरी कल्पना खड्काले भनिन्, ‘तर उहाँ नै केटीलाई आरोप लगाउँदै हिँड्नु भएको छ ।’
सम्झना अब कसकी बुहारी ?
सम्झनालाई चार वर्ष अघि विवाह गरेर घर भित्र्याएका शुभराज यतिबेला नेपाली सेनाको त्रिशुलीस्थित तालिम केन्द्रमा कार्यरत छन् । टेलिफोनमार्फत घटनाबारे जानकारी गराउँदा शुभराजले कुनै पनि हालतमा सम्झनालाई स्वीकार नगर्ने बताएको शुभराजकी दिदी कल्पनाको भनाइ छ ।
आफूसँग शारिरीक सम्बन्धसमेत राखेको र विवाह गर्छु भनेको भन्दै सम्झजना विहीबार (आज) दिउँसो विपिन दाहालको घरमा गएकी थिइन् । तर, विपिनका बुवा–आमा सम्झना बुहारीको रुपमा घरमा भित्रन आएको भन्दै घरमा ताल्चा लगाएर हिँडेका छन् ।
‘म अब कुन अनुहारले यो घरमा बसौं भन्दै बुहारीले आज विहान आत्महत्या प्रयास पनि गरिन्’ कल्पनाले भनिन्, ‘त्यसपछि उनी विपिनको घरमा गएकी छिन् । तर विपिनका आमा बुबाले घरमा ताला लगाएर घरबाट हिँडे ।’
सम्झना अहिले ताल्चा लागेको घरमा बसेकी कल्पनाले जानकारी दिइन् । नजिकै रहेको प्रहरी चौकीले सम्झनालाई पहरा दिइरहेको छ भने कुनै अप्रिय घटना नहोस् भन्नका लागि स्थानीयहरु पनि भेला भएर बसेका छन् ।
सम्झनाले आफू विपिनसँग बस्न चाहेको र उसँग शारीरिक सम्बन्ध समेत रहेको भन्दै प्रहरी र गाउँपालिकामा निवेदन दिएकी छन् । यस्तो अवस्थामा सम्झनाले न्याय पाउनुपर्ने र विपिलने सम्झनालाई स्वीकार गर्नुपर्ने खड्का परिवारको माग छ ।
पोलेको मकै व्यापारले धानेको सानुमायाको खुशी काठमाडौं – ललितपुरको पुल्चोक सडकका सवारीसाधनको कोलाहलले भरिपूर्ण छ । मान्छे ओसार्ने माइक्रोको सहचालकले घरी ‘माइतिघर–भद्रकाली रत्नपार्क’ घरी ‘एकान्तकुना&ndas...
ब्रेक्जिटमा भइरहेको किचलोका लागि सांसदहरू दोषी रहेको प्रधानमन्त्री मेको आरोप